ဓာတ်ပုံမှင် - မာကု, Draw, Sign | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဓာတ်ပုံမှင် - မာကု, သင်္ကေတပြ, Draw
ဓာတ်ပုံမှင် - မာကု, သင်္ကေတပြ, APK ကိုဆွဲပါ
ဓာတ်ပုံမှင်သင်သည်သင်၏ပုံဆွဲအနုပညာဖန်တီး, သင့်ရုပ်ပုံပေါ်ရေးသားနိုငျသောဓာတ်ပုံတည်းဖြတ် app ကိုသုံးမယ့်လွယ်ကူသည်။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့ဆေးသုတ် app ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ရုပ်ပုံပေါ်အချက်များကိုသို့မဟုတ်သင်တို့၏အကြံအစည်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျပုံကြမ်းဆွဲခြင်းနှင့်အလုပ်စဉ်သင့်ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူသုံးပါသို့မဟုတ်သင်ရုံသင်၏ဓါတ်ပုံများ (ဓာတ်ပုံပျော်စရာ) ရက်နေ့တွင်ပျော်စရာအောင်ဘို့အသုံးပွုနိုငျကူညီရန်ဖြီးနဲ့မှင်ကိုသုံးပါ။
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ်မာကု, ဓါတ်ပုံကိုအပေါ်ဆွဲပါဓာတ်ပုံပေါ်မှာရေးထားဓာတ်ပုံအပေါ် Sign ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူ။
1. ရေးသား or အမှတ်လက္ခဏာ သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအပေါ်။
2 ။ သင့်ရဲ့မီးမောင်းထိုးပြ မှတ် သို့မဟုတ်ကိုအလွယ်တကူအားဖြင့်သင်တို့၏အကြံအစည်ပြသ marking သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအပေါ်။
3 ။ သင့်ရဲ့ပြရန် ကားပုံ အခြို့သောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ဖန်တီး အတတ်ပညာ.
4 ။ ပုံဆွဲဘို့ကွဲပြားခြားနားသောကလောင်အရောင်များကိုရွေးချယ်ပါ။
5 ။ ကလောင်များအတွက်လေဖြတ် Adjust ။
6 ။ သင့်ရဲ့အနုပညာအဘို့အနောက်ခံအရောင်တင်ထားရန် option ။
7 ။ ဘောပင်၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်ရွေးချယ်ဖို့ option: ပုံမှန်, မှုန်ဝါး or ဖောင်းကြွ
8 ။ မှားကလောင်အလုပ်မဖျက်ပစ်သို့မဟုတ် marking အဘို့အ Eraser ကို။
9. multi-touch နဲ့ zoom ကို ပရီမီယံအသုံးပြုသူများအတွက် option ကို။
10 ။ ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် လွယ်ကူခြင်းနှင့်သင်၏အနုပညာ။
11 ။ option ကိုမှ ဝေစု သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ။
ဓာတ်ပုံမှင် သငျသညျအမူအယာကလောင်သုံးပြီးသင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအပေါ်ဘာမှဆွဲရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့အခြေခံဆေးသုတ် App ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်သည်တစုံတခုကိုရေးဒါမှမဟုတ် touch နဲ့အရေးအသားကိုအသုံးပြုပြီးအနုပညာဖနျတီးနိုငျသောဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်လုပ်ကိုင်သို့မဟုတ်အသစ်စီမံကိန်းများအပေါ်ကိုလူတွေကမှတ်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အရာတို့ကို Co-ပြန်ပြောပြဖို့ဒီဓါတ်ပုံတည်းဖြတ် app ကိုသုံးနိုင်သည်။
ရုံပျော်စရာလည်းတဦးတည်းသစ်ကိုရေးဆွဲသို့မဟုတ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိနိုင်ပါသည်ရှိရာကဒီအခြေခံဆေးသုတ် app ကိုသုံးနိုငျ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ်ရေးဆွဲ။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးလွင်ပြင်ပတ္တူပေါ်ရေးလိုက်သို့မဟုတ်ဆွဲရန်လိုလားလျှင်ကိုယ့်ပုံရိပ်ကိုရွေးချယ်တဲ့ pop-up အပေါ်ကိုပြန်နှိပ်နှင့်သင်ဆွဲရန်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဒီလွင်ပြင်ပတ္တူတွင်လည်းတဦးတည်းအရောင် icon ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းဖြင့်နောက်ခံအရောင်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သောဤအသုံးပြုပုံကလောင်စတိုင်ရွေးချယ်ရာတွင်တစ်ခု option ကိုလည်းမရှိကပိုအနုပညာ drawing အောင် ဆေးသုတ် app ကို ပုံမှန်ကလောင်, မှုန်ဝါးဖြီး, ဒါမှမဟုတ်ဖောင်းကြွပုံဆွဲအဖြစ်ဓာတ်ပုံပေါ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
ပုံဆွဲဒီအခြေခံဆေးသုတ် app ကိုသင်အကြိုက်ဆုံးနာမည်ကြီးတွေထဲကနေကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်ယူပြီးများအတွက်အသုံးဝင်သော tool ကိုဖွစျနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပြင်သက်သေ၏လက္ခဏာသက်သေဘို့, တဦးတည်းမှဒီ app ကိုသုံးနိုင်သည် လက်မှတ်ယူ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ်သို့မဟုတ်တစ်လွင်ပြင်ပတ္တူပေါ်တွင်ဖြစ်စေမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဖြစ်သော်လည်းယခုရက်လမ်းကြောင်းသစ် selfies သည်သို့သော်ဒီအသင့်ရဲ့ရုပ်တုတို့နှင့်ထိတွေ့စောင့်ရှောက်ခြင်း၏ဂန္နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒီ app ကိုပြသနိုင်ဖို့အတွက်အသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်နှင့်မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များအပေါ်မီးမောင်းထိုးပြအောက်ပါများထဲမှနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဤမျှလောက်များစွာသောအမှုများရှိပါသည်: သင့်ရဲ့ချစ်လှစွာသောသူတို့အတှကျအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ကားတစ်စီးသို့မဟုတ်မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာတစ်ရပ်အဖြစ်, သင့်စက်ပြင်နှင့်အတူဝေးလံသောအရပ်မှမျှဝေ UI ကိုကျွမ်းကျင်သူအမှားများကိုမီးမောင်းထိုးပြသို့မဟုတ်သင့်အဖွဲ့သည်သို့မဟုတ်သင့်ဒီဇိုင်နာများနှင့်အတူသင်တို့၏အကြံအစည်မျှဝေ, ကျော်ကြားသောအရပ်တို့ကိုမဖော်ထုတ်, ပါဝင်ပစ္စည်းများမီးမောင်းထိုးပြချက်ပြုတ်နေစဉ်နှင့်ဒါပေါ်မှာ။
ဒါဟာသင်ဤမျှလောက်များစွာသောကိစ္စများတွင်အမြဲအသုံးဝင်သည်အရာသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ရှိသည်နိုင်ကအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတည်းဖြတ် App ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးရှိရမည် ပန်းချီအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူဓာတ်ပုံကို editing tool တစ်ခုပါ သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအပေါ်ဆွဲရန်။
အသစ်အမှုနှင့်အတူ Multi-touch နဲ့ zoom ကို ဓာတ်ပုံများများအတွက် option ကိုစတင်စဉ်များထဲမှတကယ်အင်္ဂါရပ်အသုံးချနိုင်ပါတယ် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ်ရေး.
ယင်း ဒါကြောင့်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့ သုံးပါများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူဖန်တီးရန်။
ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာတိုးတက်မှုအဘို့သင့်တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုချစ်လိမ့်မယ်။ ဒီတော့ mahesh.manseta.morbi@gmail.com ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရေးလိုက်ပါ။
ဓာတ်ပုံမှင် - မာကု, သင်္ကေတပြ, Draw
3.80 ကို MB